Purchasing Executive (Code-41589) | Dagon Glory Co., Ltd. ﻿
1.Local/ Import Purchase မျာကို လုပ်ကိုင်ရမည်။
2. Basic English, Chinese (အရေး, အဖတ်) တတ်သူကို ဦးစားပေးမည်။
3. Stock ကို Monitor လုပ်၍ ပစ္စည်း မပြတ်လတ်မှုမရှိအောင် ညှိနှိုင်း၍မှာယူရမည်။
4. Supply Chain (ပစ္စည်း ဝယ်ယူသည်မှ ပစ္စည်း များ မိမိ Warehouse အထိ ရောက်ရှိသည် အထိ) တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
Age (25- 35 years old)
(Retail နဲ့ FMCG လုပ်ငန်းများတွင် Purchasing လုပ်ကိုင်ဖူးသူ)
Purchasing Executive Purchaser Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Dagon Glory Purchasing/Material Management Jobs Purchasing/Material Management Jobs Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon